Shaqooyinka MBA ee Dubai Loogu talagalay Freshers shaqooyinka Dubai iyo Abu Dhabi
Shaqooyinka MBA ee Dubai loogu talagalay Freshers
Shaqooyinka Dibedda Shaqooyinka banaan ee Magaalada Dubai
Published by Shirkadda Dubai City at January 28, 2018
Shaqooyinka MBA ee Dubai
Waxaannu qoraynaa MBA Shaqooyinka India iyo Pakistan!
Shaqooyinka MBA ee Dubai guud ahaan waxaa loogu talagalay qof kasta oo jooga Dubai. The Shirkadda Dubai City qorista badiyaa Bariga Dhexe iyo GCC. Kooxaheenna shaqaalaynta ee raadinaya la taliyayaal la xiriira waxbarida MBA. Sababta oo ah badankood shaqo ka raadinta UAE. Kordhinta ayagoo haysta imtaxaanka MBA.
Guud ahaan ka hadalka, door firfircoon ka qaadashada xallinta arrimaha shaqaalaysiinta adduunka. Si fudud taas shirkadaha ugu fiican ee qaata dadka leh MBA education. Waqti dheer, iyadoo la loolamaya kuwa ugu xusid mudan ururada Dubai ee shaqada. Dhinaca kale, shaqooyinka si wanaagsan loo bixiyo ayaa bixiya. Dibad-baxa cusub ee suurtogalka ah waa inuu fiiriyaa shirkadaha shaqaalaynta. Goobta shaqada ee Careerjet.
Raadinta loogu talagalay shaqo guud ahaan gobolka Bariga Dhexe iyo adduunka oo dhan. La-taliye ahaan, oo leh MBA waxaad u baahan doontaa inaad horumariso xirfad gaar ah. Qeybta ugu badan ee xirfadaha lagu wareejin karo sida MBA. Xaqiiqdii, waxay cadeyn doontaa qiimo lahan caawimaad u ah helitaanka ujeedooyinka mustaqbalka ee mustaqbalka. Ku biir Dubai City Kooxda shirkadda. Waxaan raadineynaa la-taliye cusub oo aan ku xirno UAE.
Waxaan hadda nahay Howl wadeenno la shaqeeya oo leh MBA Education to Shirkadaha Dubai
Ma haysataa waxbarasho aad u wanaagsan? Waxaan nahay hadda ka caawinta hogaamiyayaasha Hindiya waayo, Shaqooyinka MBA ee Dubai. Codso websaydhka iyo Resume Resume waayo, Dubai Shaqooyinka. Haddii aad haysato shahaadada Ph.d ama shahaadada simil sida MBA. Waxaad shaqo ka bilaabi kartaa Bariga Dhexe. Raadso shaqo aad u fiican oo ka jirta Emirates. U diir Resume fursadaha shaqo ee ugu fiican UAE. Ama xitaa Noqo a CEO hadaad haysato tifatirka MBA. Ka shaqeynta Imaaraadka Carabta. Maanta bilow oo la xiriir Shirkadda Magaalada Dubai. Dhanka kale, fiiri Websaydh qoris ah. Runtii aad ayay muhiim u tahay inaad codsato CV-gaaga.
Sidee loo helaa Shaqada Dubai ee MBA?
Ilaa illaa waqtigan xaadirka ah. Yaa muujinaya xiisaha ugu dambeeya ee xalinta dhibaatada. Bixiyaha ama wakhti dambe wuxuu helaa aragti wax ku ool ah si loo keeno natiijooyin macno leh. Dhanka hore, shirkaddayadu waxay Dubai ku leedahay. Marka la eego qodobbadaas, waxaan caawinaynaa fulinta. In la bilaabo kuwa raadinta xirfadaha qalin jabinta sare ee adduunka. Illaa iyo agaasimayaasha sare ganacsi shaqo doonka ah oo leh waxbarashada MBA.
Inta ugu badan, Dubai Shirkadaha doonaya dadka kartida iyo xiisaha u leh wadista Uber. Isla mar ahaantaana, waan maamulnaa MBA xirfad u leh Dubai ee loogu talagalay Hindisaha Hindiya. Xaaladahaas oo kale, maamulayaasha xirfadaha hoggaaminta. Sidaa awgeed, isbeddelka isdhaafsiga ee ka jira ururada Bariga Dhexe. Si aad uhesho hab kale, isku day inaad sidoo kale ku raaxaysato. Waddada ku jirta raadinta MBA Shaqooyin.
Raadinta shaqo ka raadinta MBA ?. Waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad toos u taabato milkiilayaasha ganacsiga. Taasina ma aha wax fudud in la sameeyo. Waxaad ubaahantahay inaad kahesho Linkedin oo aad la xiriirto. Oo halkaas ka. U soo dhowaada si aad uga dhigto inay cawsduur yeelato faahfaahinta arjiga shaqada Gulf.
Waxaan ka caawinaynaa MBA Shaqooyinka Dubai ee Freshers
Waa muhiim in la garto in shaqooyinka MBA ee ka jira Dubai mushaarka aysan aheyn wax fudud in la helo. Iyo hadaad cadaalad tahay ka qalin jabiyay MBA. Iyo dabcan iyo raadinta xirfadda. Waa inaad xasuusnaataa. Waa shaqo aad u daacad ah. Helitaanka xirfad cusub ee UAE. Guud ahaan waxay ku hadlaan kaliya MBA iyo waayo aragnimo lahayn. Dhab ahaan, waqti qaado.
Dhanka kale, haddii aad maalin walba fiirineyso. Fursadaha cusub ee MBA ee Dubai. Waxaa jira a fikrad runtii caawin badan si loo gaaro shaqooyinka. Ka bilow codsi aasaasi ah oo loogu talagalay ardayda qalin jabisay. Sababta oo ah helitaanka shaqooyinka banaan ee shaqooyinka banaan ma fududa. Maamuleyaal cusub oo hadda uun waxbarasho hela. Waa in diiradda saaro arjiga shaqada. Si fudud sababtoo ah waxay leeyihiin khibrad ku filan. Laakiin waxay heleen khibrad cusub oo la aqoonsan yahay.
Magaaladda Dubai waxay bixisaa fursado xirfadeed oo cajiib ah oo loogu talagalay MBA. Wax dhib ah ma lahan sida aad u fiican tahay. Helitaanka shaqeynta gudaha Aagga Magaalada Dubai marwalba qaadashada. Waxaa jira shirkado badan oo aad ka heli karto fursado shaqo. U dirista CV kaaga oo ah arday ka qalin jebiyey. Xitaa waad isku xiri kartaa on Linkedin
Sida ugu dhaqsaha badan ee loo helo shaqo. Gaar ahaan sida tayada leh MBA waa in codso Google. Shirkadaha tikniyoolajiyada sare iyo shirkadaha IT-ga ee ku sugan Dubai. Ma u koraan sida sheeko waalan. Sababtoo ah ilaa 2020 expo ee Dubai, waxay u baahan yihiin in la diyaariyo. Waqtigaaga ha dhumin oo iska hubi inaad ku haysato CV gacantaada ku jira markii aad u baahatid.
Shaqooyinka MBA ee garoonka diyaaradaha Dubai
Mid ka mid ah shaqooyinka ugu wanaagsan ayaa ka shaqeeya garoonka. Fahmitaanka xeerarka iyo waajibaadka. Dhanka shaqooyinka dowladda ayaa muhiim u ah khibradda shaqo ee UAE. Marka si kasta oo ay tahay waaya aragnimadaadu. Shaqooyinka MBA ee Madaarka Dubai had iyo jeer way furan yihiin. Gaar ahaan ardayda qalin jabisay. Madaarka Dubai. Maamulayaasha HR mar walba raadinaya musharrixiin cusub.
Waxaad u baahan tahay inaad toos ula xiriirto maamulka shaqaaleynta. Maalintan waxaad ka heli kartaa shaqooyin wanaagsan. Dadbadan waxay ku baxdaa Pakistan iyo Hindiya. Inaad haysato MBA oo aadan garaneyn waxa waxbarashada laga sameeyo. Dabcan, waad raadin kartaa xayeysiiska maxalliga ah. Laakiin sida aan had iyo jeer sheegnay. Ka shaqeynta Emirates gudaha UAE. Waxaad noqon kartaa halyeey Bariga Dhexe. Dadka intiisa badan ayaa eegaya si ay u noqdaan dalxiis ku yaal Dubai sidoo kale waa inaad aqrisaa dhowr hagayaal sida loo sameeyo.
Had iyo jeer iska hubi in codsiyadaadu yihiin kuwo aan daahfureen. Guud ahaan, dhab ahaantii waxay taagan tahay xitaa ee loogu talagalay qorayaasha telefoonka gacanta. Lahaanshaha hufnaanta MBA waxay kaa dhigeysaa qof aqoon leh. Markaa dalabkaagu waa inuu ka soo baxo dadka badan. Qurbajoogta aqoonta sare leh had iyo jeer haysashada resume aad u wanaagsan oo xirfadaysan. Dabcan, dadka leh CV-ga ugu fiican markasta shaqo helista fasters. Taasi waa hubaal.
Ku shaqo hel oo leh MBA caqli badan habka loo isticmaalo goobaha shaqada. Isku day inaad raadiso suuqyo badan, la xiriir dad badan. Fure u ah shaqooyinka MBA waa inay raadiyaan shaqaaleyaal shaqaale oo sidoo kale haysta MBA. Guud ahaan, waxay ku siin doontaa meel aad u badan oo furan si loo dhiso warbixinta. Waxaad awoodi kartaa ka hel xafiisyada shaqaalaynta ee Dubai.
Shaqooyinka MBA ee Dubai ee Pakistan
Qurba joogta ka yimid Pakistan had iyo jeer u safraya Dubai. Intooda badani waxay ka raadiyaan shaqooyinka MBA ee Dubai si ay u cusboonaysiiyaan. Iyo fikir aad u sareeya Shaqaaleynta Dubai waa fududaan doontaa. Dhab ahaantii shaqo-bixiyeyaasha jooga Emirates guud ahaan waxay jecel yihiin maamulayaasha cusub ee MBA. Shaqaalaha loo shaqeeyaa ee UAE, ma jirto wax ay ka imaanayaan.
Dhanka kale, waxaad ka heli kartaa jagooyinka Maamulaha. Waxaa intaa dheer, haddii aad raadineyso jagada maareynta hoose. Xaqiiqdii, waa inaad isku daydaa goobo shaqo suuqyada maxalliga ah. Dadka shaqo doonka ah ee Pakistan ayaa codsan kara ee sarkaal sare maareynta shaqooyinka shaqooyinka banaan ee Dubai. Waxaa intaa dheer, haddii aad jeceshahay in lagu meeleeyo. Kaalinta maareynta MBA ayaa ugu horreyn mas'uul ka ah. Iibsiga macaamiisha cusub iyo horumarinta ganacsiga. Isla mar ahaantaana dib ugu bilaw xayeysiinta shirkaddayada. Oo annaguna waan samayn doonnaa meel Adiga oo shaqooyin cusub ka helay UAE. Sidoo kale, dib u eegis sida warbaahinta bulshada u caawiso helitaanka shaqo.
Inta badan oo ka soo jeeda Pakistan oo shaqo raadinaysa Dubai. Ma jiraan wax dhibaato ah oo loo-shaqeeyayaasha inay ku beddelaan qof cusub ganacsigiisa. Gaar ahaan haddii qof cusub oo eegaya meelaynta Dubai ee Poland. Sannadihii xigay, teknolojiyadda ayaa kor u kacday. Loo shaqeeyeyaasha iyo shaqaaleeyayaasha wax maareynaya waraysiyo shabakada internetka ee ku saabsan skype.
Shaqooyinka MBA ee Dubai ee Indian
Guud ahaan Shaqooyinka Dubai ka dib markii macaamiishii MBA loogu talagalay Hindisaha. Ka mid yihiin heshiisyada ugu wanaagsan ee ay heli karaan. Kadib markaad hesho jagooyinka maamulka. Iyada oo leh waayo-aragnimo MBA. Doorka ayaa kaa dhigaya inta badan mas'uul ka ah macaamiisha cusub ee Dubai. Dhanka kale, waxaad ubaahantahay inaad orod u hesho helida iyo hormarinta ganacsiga.
Isla mar ahaantaana ay ka mid yihiin kuwa fuliya howlaha shaqo ee ka jira Dubai. Waa inaad ka shaqeysaa horumarinta macaamiisha cusub ama mashruuca iyo xitaa suuqyada. Intaa waxaa sii dheer, la macaamila madaxda sare iyo agaasimayaasha. Wadajir iyadoo maamule sare ee hoteelada 7star ee Dubai. Sababtoo ah inta badan dadka ku nool UAE oo leh waxbarasho sare waxay ku nasanayaan hudheelo fiican.
Si la mid ah maareynta xayeysiinta badeecadeena. Dhismaha iyo joogteynta wacyiga shirkada. Maaddaama madaxda sare ay horumariyaan howlaha khadka. Isla tusaalahan kor u qaadida wax soo saarka shirkadda si loo gaaro bartilmaameedka. Maaha in la xuso in ganacsi loo keeno ururka. Indian shaqaale cusub oo ku sugan Dubai oo si adag u shaqeeya. Laakiin ummadaha kale sida Koonfur Afrika waxay sidoo kale bixiyaan shaqooyin shaqo oo si wanaagsan loo sadaqo. Gaar ahaan qeybta Abu Dhabi ee Dawladdu maamusho maalgashiyada cusub.
Shirkadaha Dubai waxay u furan yihiin CV cusub. Sidaas, shaqooyinka bannaan ee Hindida ee shirkadaha Dubai runtii waa la furay. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, shirkaddayadu waxay soo saartaa dhowr qodob. Taasna rajo ayaan ku qabnaa adiga soo booqde cusub waxaad shaqo ka heli doontaa UAE adoo akhrinaya qormooyinkeena talo.
Xirfadaha iyo khibradda la rabo markaad la shaqaynayso MBA
Murashaxiinta Tartanka Heerka Sare: MBA ayaa doorbiday inay wax ku bartaan dibadda. Tusaale UK ama Canada ama Yurub. Xaqiiq ahaan, waa inaad lahaataa ugu yaraan 1-5years waayo-aragnimada suuqa shaqada iyo iibinta kaliya loo bilaabo sidii maareeye sare oo sare. Badiyaa reer Dubai Shirkadaha. Ubaahan musharraxiin caqli badan oo aqoon xoog leh u leh suuqgeynta.
In kasta oo ay taasi run tahay kuwa ugu fiican waa kuwa diyaar u ah inay u wareegaan magaalada Dubai City. Waayo maaraynta mashaariicda ganacsi ee waaweyn. Dhinaca taban, murashaxiintu waxay u baahan yihiin inay sameeyaan wicitaan qabow, Ururinta Xogta iwm. Sidoo kale, waa inaad ka fikirtaa jaamacadda Dubai. Iyada oo waxbarasho wacan oo cusub oo leh shaqooyin xooggan ayaa bixiya dugsiyada.
Qayb kale oo aad ka heli karto shaqo waa shirkado maaliyadeed. The shaqooyinka bangiyada ee Imaaraadka Carabta aad ayaa loo jecel yahay. Dayaca kaliya ayaa ah inaysan sahlaneyn in la helo. Haddiise aad bililiqaysaneyso, ma fududa in la soo noqdo. Xirfadaha Isgaarsiinta wanaagsan iyo Soo-dhaweynta dibadda ayaa ah faa'iido dheeraad ah. Si fudud haddii aad rabto si ay uga shaqeeyaan Dubai.
Haa, sidaas awgeed waxaan hadda ku helaynaa waxbarasho fiican. Waxaad u baahan tahay hadda ogoow sida aad shaqo ugu heli lahayd Dubai. Iyadoo maskaxda lagu hayo, waxaad u baahan tahay inaad wax yar ka ogaatid todobada Emirates. The meesha ugu fiican ee shaqada loo noqdo Dubai. Iyo qof kasta oo booqan doona UAE. Waxaan kuu sheegi doonaa inay jiraan waxyaabo badan meelo dheeraad ah oo shaqo looga raadsado Imaaraadka Carabta. Waxaa jira Abu Dhabi iyo Shariah. Dhammaan meelahan oo dhan waxaad xaqiiqo ka heli doontaa shaqooyin.
Mid ka mid ah qodobbada ugu fiican ee talo-bixinteena shirkadda bixisa ee Dubai. Guud ahaan waxaa weeye in aan aragno annaga Tilmaanta shaqaaleynta. Sababtoo ah sida ugu fiican ee lagu helo loo shaqeeyeyaasha gudaha United Arab Emirates waa in si toos ah loogu wajaho iyaga. Waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto loo shaqeeyeyaasha iyo inay hubiyaan inay helayaan Vitae-gaaga. Tusaalooyinka mid ka mid ah waa in xiriir lala yeesho shirkadaha shaqaaleysiinta baabuurta. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso ayaa kuugu dheji karta CV-gaaga waxaadna hubisaa inay arki doonaan hadalkaaga iibinta.
Waxaa jira hage dhan Xirfadaha Dubai iyo Abu Dhabi. Shirkadeena waxaa lagu qoray dhowr qoraalo ku saabsan raadinta shaqooyinka ee Imaaraadka Carabta. Waxaad ubaahantahay inaad lahaato khibrad gaar ah iyo waxbarida iskuulka shaqooyinka UAE. Wakiilada shirkadayadu runtii way la taliyaan dadka sida loo helo shaqo Dubai. Laakiin kuma caawin karno haddii aadan buuxin shuruudaha ugu yar ee loo shaqeeyaha.
Sida aan u sheegno fadlan isticmaal Tilmaanta Magaalada Mumbai oo fiiri noo Tilmaanta Xannaano-maalmeedka ee Shirkadda Diyaaradaha ee Shirkadda Diyaaradaha ee Imaaraatka ee Emirates. Xaqiiqdii waxaad ka heli doontaa macluumaad qiimo leh adiga. Qaar ka mid ah shaqo doonka ayaa ka yimid Pakistan iyo Hindi. Horeba nasiib ayaan u yeeshay dhawr shaqooyinka waxaa laga helayaa hagida shaqooyinka ee Kuweyt.
Sida loo helo MBA shaqada ee Dubai si dhakhso ah?
Waayahay, sida ugu dhaqsaha badan ee shaqo looga helo UAE. Waa in la dalbadaa kuma koobna oo keliya Dubai ama Abu Dhabi. Waa inaad ka codsataa shaqaaleeyeyaasha ka yimid adduunka oo dhan. Tusaale ahaan, waad heli kartaa shaqaaleysiinta shirkadaha Sacuudi Carabiya. Iyo wadamada kale ee GCC ee shaqada sida Qadar iyo Kuwait. Maamulayaasha MBA waxaa laga sameeyaa dhowr wadan.
Dadka ugu caansan UAE waa Hindida, Pakistani iyo Filipino dadka doonaya in ay ka shaqeeyaan Dubai. Intooda badanina waxay helayaan jagooyin wanaagsan maxaa yeelay waxay waqti aad u dheer ku noolaa Imaaraadka Carabta. In laga jawaabo sida shaqo loogu helo Dubai hab dhakhso ah waa sahlan tahay. Aad u baahan tahay inaad shaqee oo ku noolow Dubai ama Abu Dhabi ka hel khibrad ka yimid loo shaqeeyayaasha Bariga Dhexe. Ka dibna raadiso fursado cusub.
The dumarka u shaqeeya aan la qiyaasi karin. Gaar ahaan Bariga Dhexe. Xaqiiqdiina, iyagu waa ka helitaanka fursado shaqo oo cajiib ah Shirkadaha UAE. Dabcan oo leh mushahar aad u sarreeya. Sababtoo ah dumarka qurbaha ku nool waxay aad uga taxadaraan qaabka ganacsiga. Feejignow faahfaahinta oo abuuro saameyn togan xagga shaqada markaad u guurto UAE. Dhamaadka mawduucan fadlan ka fiiri kuwa kale Talooyin loogu talagalay dadka ajnebiga ah ee ku jira boggeena. Waxaan leenahay rajo weyn ayaa kaa caawin doonta inaad dhul u hesho ku riyoodaan shaqada Emirates.
MBA shaqo raadin MBA!
Soo hel a MBA Shaqada Dubai ee mashiinka raadinta si la yaab leh ayaad u heli kartaa.
Si fudud u bilaabi a xirfad cusub Dubai!
Resume Resume oo ah magaalada ugu sarreysa ee aduunka! - Shirkadda Dubai City hadda ka caawinaya Sharjah
Shirkadda Dubai City hadda siinta hagyo fiican ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waxaad hadda ka heli kartaa hagitaanno, talooyin, iyo shaqo oo aad ka hesho Imaaraadka Carabta oo aad ku hesho luqaddaada.